Warbixin Kooban ee Gudoomiyaha DeWine / Governor's briefing - Somali » Global Cleveland
Warbixin Kooban ee Gudoomiyaha DeWine / Governor's briefing - Somali
Warbixin Kooban ee Gudoomiyaha, Wadaag 19-aad faafida
Meey 7, 2020
In kabadan 22,000 oo kiis oo COVID-19 ah ayaa laga soo sheegey gobolka, in kabadan 1,200 oo qofna way dhinteen.
Guddoomiyaha DeWine wuxuu rajaynayaa in tirada kiisaska la kordhiyo maadaama dhaqaaluhu furmayo. Dadka reer Ohio waa inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii loo xadidi lahaa faafitaanka iyagoo ku celcelinaya mashquulinta bulshada iyo xirashada maaskaro. Qof waliba waa inuu raaco qawaaniinta iyo talooyinka si loo hubiyo in meheraduhu furnaan karaan.
Saqafyada timaha, golayaasha golayaasha, saqafka ciddiyaha, iyo adeegyada daryeelka shaqsiyadeed
Simaasha timaha lagu xirto, jaranjarooyinka gogosha, maalinlaha maalinta si dib loogu furo 15ka May.
Macaamiisha waa inay ku sugaan gaariga illaa ballanka uu ka dhammaanayo.
Macaamiisha kaliya ayaa la oggol yahay, marka laga reebo carruurta leh waaliddiinta ama daryeeleyaasha.
Ma jiraan joornaallo ama cabitaanno is-adeegsi ah.
Mas Maqaarka waardiyaha looga baahan yahay macaamiisha iyo shaqaalaha labadaba
Fayadhowr inta u dhexeysa ballamaha.
Eeg xeerarka halkan: https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/Personal-Services.pdf
Cunnada banaanka dibaddiisa waxay furan tahay May 15
Qolka cuntada lagu furo wuxuu furan yahay May 21
Makhaayadaha iyo baararka waxaa looga baahan doonaa inay dhisaan qorshooyinka sagxada si ay u dhiiri geliyaan fogeynta jirka.
Macaamiisha waxaa laga yaabaa inay u baahdaan inay ku sugaan gawaaridooda si loo fariisto.
Dadweynaha ayaa la weydiiyay inay is-kormeeraan astaamaha COVID-19.
Meelo bannaan oo isugu yimaad sida dabaqyada qoob-ka-ciyaarka ayaa wali xiran.
Eeg xeerarka halkan: https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/Restaurants-and-Bars.pdf
Habka ugu wanaagsan ee makhaayadaha loo arko halkan: https://coronavirus.ohio.gov/static/responsible/Restaurant-Food-Establishment-Guidance.pdf
Guddoomiyaha DeWine wuxuu sameyn doonaa ogeysiis 12ka Maajo ee ku saabsan daryeelka carruurta
Ka codbixinta Ohio waxay ugu horreyn noqon doontaa boosta; taarikhda ayaa la kordhiyay ilaa Abril 28, 2020. La xiriir Guddiga Doorashada ee Degmada Cuyahoga at https://boe.cuyahogacounty.us/, ama wac 216-443-8683 si aad u hesho qof maqan
Ohio gudaheeda, 867 kiis ayaa la xaqiijiyay; 223 isbitaal; 15 dhimasho ah. Ku faafay 60/88 gobolada Ohio. Xusuusin: Waxaa wali ka jira hadba tijaabada iyo helitaanka natiijooyinka; Kiisaska dhabta ahi way badan yihiin.
Macluumaadka loo fayl garaysto sheegashooyinka shaqo la’aanta ayaa laga heli karaa halkan:http://jfs.ohio.gov/ouio/CoronavirusAndUI.stmWaxaa fayl garayn kara khadka tooska ah ee 24/24; cusbooneysiinta sheegashada waxaa la sameyn karaa waqti dambe haddii aad dhib ku qabtid inaad taleefanka kula xiriirto wakiilka.
Guddoomiyaha DeWine iyo Agaasimaha Caafimaadka Acton waxay sii wadaan inay ku booriyaan dhammaan dadka reer Ohio inay ku celceliyaan fogeynta bulshada. Aad ayey muhiim u tahay haddii aan yareyneyno tirada kiisaska iyo dhimashada Ohio.
tan qoraalka maanta ah:
Gudoomiyaha DeWine ayaa soo saaray amar guri-ku-hayn guriga ah laga bilaabo Isniinta, Maarso 23, 2020, laga bilaabo 11:59 pm. Kaliya safarada lama huraanka ah (cuntada, daawada, tusaale ahaan) ayaa la oggol yahay. Kaliya ganacsiyada lama huraanka ah (sida lagu qeexay nidaamka) ayaa ah inay sii wadaan howlaha goobta. Faahfaahinta ku saabsan Amarka waxaa laga heli karaa at: https://content.govdelivery.com/…/1…/Stay%20Home%20Order.pdf
Shaqaalaha daryeelka caruurtu waa inay lahaadaan shati ku meelgaar ah oo shaqaynaya laga bilaabo Khamiista, Maarso 25, 2020. In aan ka badnayn 6 carruur ah qol. Slot waxaa mudnaan la siinayaa shaqaalaha daruuriga ah. Faahfaahinta at JFS.Ohio.gov/CDC
Si deg deg ah u hakinta shaqaalaynta dhammaan hay’adaha Gobolka.
Gudaha Ohio 442 ayaa la xaqiijiyey kiisas iyo 6 dhimasho ilaa maantadan la joogo laakiin baaritaano kale oo badan ayaa aad u fiican. Kuwa cudurka qabaa waxay ka yimaadeen dhallaanka ilaa da’da 93.